मोदीको विकल्प खोज्दै भारतीय मतदाता, नरेन्द्र मोदी चिन्तित हुनुपर्ला? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
मोदीको विकल्प खोज्दै भारतीय मतदाता, नरेन्द्र मोदी चिन्तित हुनुपर्ला?
नयाँदिल्ली : भारतका पाँच राज्यमा भएको निर्वाचनमा कंग्रेस आई सशक्त देखिएको छ। तीनवटा राज्यमा कंग्रेस विजयी भएको छ भने दुईवटा राज्यमा क्षेत्रीय दल विजयी भएका छन्।
त्यस्तै तेलंगनामा क्षेत्रीय दल तेलंगना राष्ट्र समिति (टीआरएस) विजयी भएको छ भने मिजोरममा मिजो नेशनल फ्रन्टले बहुमत हासिल गरेको छ। सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीको पराजय भएको छ।
भारतमा विधानसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको दक्षिणपन्थी बीजेपी पार्टीले राजनीतिक गतिरोधको सामना गर्नुपरेको देखिएको छ।
तीनवटा प्रमुख राज्यमा निर्वाचन मतपरिणाम बीजेपीको अनुकूल देखिएको छैन। प्रमुख विपक्षी कंग्रेस पार्टीले छत्तिसगढ र राजस्थान राज्यमा आफ्नो सरकार बनाउन सक्ने देखिएको छ भने मध्यप्रदेश राज्यमा चुनावी घम्साघम्सी जारी छ। कतिपयले यस्लाई आगामी आमनिर्वाचनसँग जोडेर हेर्न थालिसकेका छन्।
सन् २०१९ मा हुन थालेको लोकसभा निर्वाचनभन्दा केही महिना भएको यो निर्वाचनलाई कतिपयले त्यसको पूर्वसंकेत भनेका छन्।
कंग्रेस आईका अध्यक्षमा राहुल गान्धी आएपछि भएको निर्वाचन परिणामले उनको नेतृत्वलाई सफल वा असफल भनी मापन गर्ने कडीका रूपमा लिइएको छ। निर्वाचन परिणामसँगै गान्धीले कंग्रेसको सरकार बन्नासाथ सबै किसानको ऋण माफी गर्ने बताएका छन्। दिल्लीस्थित पार्टी मुख्यालयमा कंग्रेस कार्यकर्ता खुशी प्रकट गरिरहेका छन्।
२०० सिट रहेको राजस्थानमा कंग्रेस १०१ र भाजपा ७३ स्थानमा अगाडि छन्। २३० सिट रहेको मध्यप्रदेशमा कंग्रेस र भाजपाको कडा प्रतिस्पर्धा रहेको छ। कंग्रेस ११४ र भाजपा १०९ सिटमा अगाडि छन्। ११९ सिट रहेको तेलंगनामा टीआरएस ८८ ले सिट जितेको छ। ४० सिट रहेको मिजोरममा मिजो नेशनल फ्रन्टले २६ सिट जितेको छ।